Iran: Taombaovao Nowruz Tsy Misy Trondro Mena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2012 9:03 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, русский, عربي, Español, 日本語, English
Manana ny toerany manokana eo amin'ny taombaovao Iraniana ankalazaina ny andro voalohany amin'ny lohataona (20 marsa) antsoina hoe, Nowruz, ny trondro mena. Saingy isan-taona dia manao fanentanana mandrisika ny mponina tsy hividy azy ireny ny bilaogera sy ny mpiaro ny [zon'ny] biby. Tazonina amin'ny toerana mampalahelo ny trondro ary an'arivoarivony amin'izy ireny no maty isan-taona.
Ny ivom-pombafomba fankalazana ny Nowruz dia ny latabatra “Haft Sīn” fametrahana ny famantarana ny hanimpitoloha (sakafo fito karazana) izay samy manomboka amin'ny litera ‘S’ (سین amin'ny teny Persa) avokoa ny anarany. Ravahana labozia, fitaratra, atody voaloko ary trondro mena ihany koa ny latabatra. Maro ny Iraniana tsy mitovy hevitra amin'ity raharaha ity.
Jadid Online nandrakitra lahatsarim-panadihadiana fohy (misy dika an-tsoratra amin'ny teny anglisy) tamin'ny 2008 mampiseho ny fomba fividianana, fivarotana ary fiompiana an'orinasa ny trondron'ny Nowruz.
Manoratra [fa] ny bilaogera Iraniana:
Tsy mitovy hevitra amin'izany ny ao amin'ny Greenblog. Manoratra ny bilaogera [fa]:
Nanampy ny bilaogera fa raha niteny ny sasany hoe avy amin'ny fomban-drazana shinoa ny trondro mena, nohamarininy tao amin'ny aterineto tamin'ny alalan'ny google kosa indray fa naka io fomba io tany Iran ny Shinoa!